Mon Petit Avatar: Melaka Calling
Posted by Mon Petit Avatar at 9:43 PM
ပန်းတွေနဲ့ ဝေနေတဲ့ ဆိုက်ကားကတော့ လှချက်
မြစ်ထဲမှာ အပျော်စီးလှေလည်းစီးချင်သေးတယ် ..
ရန်ကုန်မှာ သင်္ဘောအပျော်စီးတုန်းက အရသာ ခုထိ အမှတ်ရနေသေးတယ်
In this post, first I only see foods that I familiar in S'pore. Miss S'pore, miss Malaysia.
I also tookapicture with Flowery Tricycle when we went to Malacca.Our group (30 peoples) went around Malacca with those tricycle and hadalot of fun.
The most advisable restaurant for foreign travelers is Paranakan Restaurant where varieties of Baba Nyonya cuisines and delicacies available (and tourist friendly). In fact, it is not 100% true "visiting Melaka is not complete withoutariver cruise" but if you miss to walk "Jonker Street", you cannt say that you have been to Melaka :))
အစားအသောက်ရော။ လည်စရာပါပေါတယ်လို့ပြောတာ ကြားဘူးတယ်။
စားချင်စရာလေးတွေစားပြီး ကြည့်ချင်စရာလေး တွေ ကြည့်သွားတယ်
ဗိုက်ဆာနေတုန်း မွန့်ဆီရောက်လာတာ...စားချင်စရာလေးတွေချည်းပဲ... သရေယိုသွားတယ်...။ စိန့်ပေါလ်ချာ့ခ်ျအဟောင်းကစိတ်ဝင်စားစရာ သဘောင်္ကြီးတွေရောပဲ..။.
ပန်းတွေနဲ့ ဝေနေတဲ့ ဆိုက်ကားကို သင်္ဘောဆိပ်အထိ စီးသွားပြီး အဲဒီကမှ မြစ်ထဲမှာ river cruise စီးချင်တယ်..။
ပန်းတွေနဲ့ဝေနေတဲ့ ဆိုက်ဂျဲရိုးကြီးစီး၊ သင်္ဘောကြီးစီးပြီး လည်၊ ဗိုက်ဆာရင် အရသာရှိတဲ့ မုန့် တွေစား..နိပ်သဗျား...
တို့ကရေကြောက်တော့ river cruise မစီးခဲ့ဘူးချောရေ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဆို အသက်ကြီးလာလို့ပိုကြောက်နေတာလားလို့ မေးသေးတယ်။
အဲဒိပန်းဆိုက်ကားလဲမစီးခဲ့ဘူးမမရေ။ သွားတာကတော့ ကားသမားနဲ့မှသုံးယောက်ထဲမမ။ ကားရပ်စရာရှာတာ သုံးလေးပတ် ပတ်နေရတာနဲ့စိတ်တော့ တော်တော်မောသွားတယ်။
ကိုAATO ရေ စားတော့စားခဲ့တာ ဘယ်ဆိုင်လဲမမှတ်မိခဲ့ဘူး။ Jonker Street ကိုကြိုက်တယ်။
တို့တော့ သန့်နေတာမြင်တာနဲ့ နေချင်စိတ်ပါပေါက်နေတာစောရေ။
မမရွှေဇင်ရေ လာပါ ကြည့်ပါ အမြဲကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။
တို့လဲ Church အဟောင်းကြီးကိုကြိုက်တယ် မိုးငွေ့လေး။
ရေသာကြောက်တာတခါတလေ သိပ်ချမ်းသာချင်ပြီး cruise line နဲ့ခရီးသွားကြည့်ချင်တယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ။
ညီမလေးစန်းထွန်းရဲ့ ရေးထားတာက ပိုပျော်စရာကောင်းတယ်။